काठमाडौं उपत्यकामा १,७०२ सहित मुलुकभर ३,०९३ जनामा कोरोना संक्रमण Canada Nepal
कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन नेपालको कस्तो छ तयारी ?
आफु डिप्रेसनको शिकार भएको खुलासा गरे शाहरुखले
स्पुतनिक फाइभ ९५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको रुसको दाबी
कानुनविपरीत अन्तर्वार्ताको तयारी गर्ने तीन म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा
विश्वले एकसाथ कोरोना भाइरसविरुद्धका धेरै खोप पाउँदै
क्यानाडानेपाल कार्तिक ४ २०७७
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीले एक वर्ष पूरा गरिरहँदा खोपको विकास अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । आउँदो डिसेम्बर मध्येबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने बताएको छ ।
अहिलेसम्म फाइजर र बायोटेकले निर्माण गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ९५ प्रतिशत, मोडर्नाको खोप ९४ दशमलव ५ प्रतिशत, रुसको स्पुतनिक फाइभ ९० प्रतिशत र अक्सफोर्डको एस्ट्राजेनेकाको ९० प्रतिशत प्रभावकारी रहेको दाबी गर्दै समाचार आइरहेका छन् ।
अन्तिम चरणमा पुगेका अन्य मुलुकका खोपहरु पनि बजारमा आउने तयारीमा रहेका छन् । तर, नेपालमा भने कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप कहिले आउँछ भन्नेमा सबैको चासो छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप प्रमाणित भएर विश्व बजारमा आउनेबित्तिकै नेपालमा ल्याउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । विश्व प्रतिजैविक सचेतना सप्ताहका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले भने, ‘अरु मुलुकका नागरिकले प्रयोग गर्दा नेपाली जनताले पनि प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि सबैतर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ ।’
मन्त्री ढकालकाअनुसार विश्वबजारमा कोरोनाविरुद्धको खोप आएसँगै नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याइनेछ । यसका लागि सरकारले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अदार पुनावालासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
केही दिन अघि सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै पुनावालाले कोरोना खोपका लागि नेपाल र बंगलादेशलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएपछि नेपाल सरकारले सम्पर्क गरेर भ्याक्सिन ल्याउने तयारीलाई बढवा दिएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा मान्यता प्राप्त सस्तो खोप १ सय ७० मुलुकमा आपूर्ति गर्ने एसआईआई खोप बनाउने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेर एसआईआईले ‘कोभिसिल्ड’ नामले खोप निर्माण गरिरहेको छ ।
इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर)को निगरानीमा भइरहेको सो खोपको परीक्षण सफल हुनसाथ नेपाल ल्याउने सरकारको तयारी छ । ‘२ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिने सो खोप ल्याउन पनि सहज हुने नेपाल सरकारको बुझाइ छ ।
९० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको कोभिसिल्डको १० करोड मात्रा (डोज) आउँदो जनवरीबाट उपलब्ध हुने र फेब्रुअरी अन्तसम्म सयौं मिलियन तयार हुने एसआईआईले जनाएको छ । जसको एक डोजको मूल्य १६ सय नेपाली रुपैयाँ पर्ने पनि बताइएको छ । यो खोप दुई डोज लगाउनुपर्छ ।
मंसिर १०, २०७७ बुधवार १३:१०:४७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ। गत वर्ष चीनको हुबेइ प्रान्तको वुहान शहरबाट फैलिन सुरु भएको कोरोनाभाइरसको महामारीले विश्वव्यापी रुपमा भयावहको अवस्था सृजना गरेको छ। भाइरस फैलिन सुरु भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत यसको आतंक कम भएको छैन।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार हालसम्म विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ६ करोड १ लाख ५ हजार ७ सय ४० पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १४ लाख १४ हजार ८ सय ६८ पुगेको छ । त्यस्तै हालसम्म विश्वमा ४ करोड १५ लाख ५३ हजार ७ सय ७३ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।
यतिबेला संसारका सबै मानिसहरु कोरोना भाइरसविरुद्ध खोपको पर्खाइमा रहेका छन्। अहिले खोप विकास गर्ने कम्पनीहरुको लिष्ट थपिँदै गर्दा आ–आफ्नोे खोपको प्रभावकारिता र उपयोगिताबारे वर्णन गर्दै उपचारमा सफलता हात लाग्ने दाबी गरिरहेका छन् । जसमा फाइजर र बायोटेकले निर्माण गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ९५ प्रतिशत, मोडर्नाको खोप ९४ दशमलव ५ प्रतिशत, रुसको स्पुतनिक फाइभ ९० प्रतिशत र अक्सफोर्डको एस्ट्राजेनेका ९० प्रतिशत प्रभावकारी रहेको दाबी गरिएको छ ।
यी खोपहरु अबका केहि हप्तामै मानिसहरुमा लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी, दर्जनौं खोप निर्माण भएसँगै, यस महामारीबाट छिट्टै छुटकारा पाइने विश्वभरका विज्ञहरुले अपेक्षा गरेका छन्। संसारभर दर्जनौं खोप निर्माण हुँदा कम से कम केही खोपहरू सफल हुने सम्भावना बढ्ने हुँदा मानिसहरुले सुरक्षित र प्रभावकारी खोप पाउन सक्नेछन्।
यसैबीच, एस्ट्राजेनेकाका सीईओ पास्कल सोरेनले भने, ’ विश्वबाट महामारी हटाउन धेरै खोपको संख्या आवश्यक छ। फाइजर, मोडर्ना र एस्ट्राजेनेकासँग संसारका लागि पर्याप्त खोप उत्पादन क्षमता छैन।’ जसमा उनले थपे, ‘यो वास्तविकता हो, प्रतिस्पर्दा होइन।’
यतिबेला, विश्वभरिका विभिन्न कम्पनीहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको करोडौं डोज तयार पारिरहेका छन्। जो कम्पनीहरू अझै पछाडि छन् अर्थात् ट्रायलको अवस्थामा छन्, यससमयमा उनीहरु पनि आफ्नो खोप छिटो भन्दा छिटो बजारमा ल्याउने तरखरमा छन्।
कोरोनाको खोप विकास गरिरहेको मोडर्ना जनवरीसम्ममा अमेरिकाको लागि करिब २० मिलियन डोज तयार पार्ने बताएको छ। त्यसैगरि, एस्ट्राजेनेका वर्षको अन्त्य सम्म युकेका लागि चार मिलियन डोज तयार पार्ने भएको छ।
अन्ततः तीन वा चारवटा कम्पनीले मात्र सम्पूर्ण विश्वलाई कोरोना खोप दिन सक्दैनन्, यसका लागि थप कम्पनीहरूले विश्वलाई सहयोग गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरुले बताएका छन्।
यद्यपि, कुन खोप प्रभावकारी हुन्छ भन्न गाह्रो हुन्छ। जसका लागि, उत्पादन र निर्माणमा अझ बढी काम गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। यतिबेला, हाल संसारमा एक दर्जन भन्दा बढी कोरोना खोपहरूको अनुसन्धान भइरहेको छ।
मंसिर १०, २०७७ बुधवार ११:५८:३१ बजे : प्रकाशित
# कोरोना भाइरसविरुद्ध
आज मुलुकभर थप १,७९० जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा १,७९० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ । मंगलबार मन्त्रालयको नियमित अपडेटका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १,७९० जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिइएको छ।
योसँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या दुई लाख २४ हजार ७८ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २७९१ जना डिस्चार्ज भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या २,०४,८५८ पुगेको छ ।
यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा २४ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १,३६१ पुगेको छ ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १६:२७:३२ बजे : प्रकाशित
कोरोनाबाट जोगाउने बहुउपयोगी असुरोको पात
काठमाडौँ। असुरो औषधीय गुण भएको बुट्यान वर्गमा पर्ने वनस्पति हो । यो वनस्पति नेपालमा १२०० मिटरसम्मको उचाइमा विशेष गरेर बाटा, धाराको छेउछाउ र वन जंगलको किनाराको खुला क्षेत्रमा पाइन्छ । फूलहरू एउटै डाँठमा गुच्चमुच्च हुन्छन्।
फूलको रंग सेतोमा प्याजी नसाका धर्का देखिन्छ। पूर्ण रूपले फूलेको फूल हेर्दा भ्यागुतो वा छेपारोले मुख बाएको जस्तो देखिन्छ। बिरुवाको खासगरि प्रयोगमा आउने भाग पात हो। यो तीतो हुन्छ । यो बिरुवा वर्षै भरी हरियो हुने हुनाले यसको पात बराबर सङ्कलन गर्न सकिन्छ । तर, फूल फूल्नु अघि सङ्कलन गरेका पात बढी उपयोगी हुन्छ ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण भएका बिरामीलाई असुरो एक चमत्कारिक आयुर्वेदिक औषधि हुन सक्छ। यसले श्वास मार्गमा जमेर रहेको कफलाई पातलो बनाइ सजिलै बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ । रुघाखोकी लागेमा असुरोको पात वा फूलको रस १० देखि १५ मिलिलिटर र सुपको रुपमा ४० देखि ८० मिलि प्रयोग गर्न सकिने आयुर्वेदिक चिकित्सकहरुले बताउने गर्छन् ।
ताजा पातको रस निचोरेर मह वा अदुवाको रससँग मिलाएर खाने गर्दा पुरानो खोकीको लागि पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ। यद्यपि, यसको प्रभावकारिता र उचित नतिजा प्राप्त र यसलाई कति मात्रमा प्रयोग गर्न अनुभवी वैद्य वा चिकित्सकको परामर्श निकै आवश्यक पर्छ।
त्यसैगरी, असुरोलाइ मुख्य गरेर श्वासप्रश्वास प्रणालीका रोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। असुरोमा एन्टिइन्फ्लेमेन्टरी, एन्टिबायोटिक र एक्सपेक्टोरन्ट गुणहरु भरपुर मात्रामा पाइने भएकाले यसले रुघा, खोकी र फ्लूको उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
यसले छाती र नाकमा जमेका फोहोर, कफ आदिबाट छुट्कारा दिन्छ भने यसले रुघा लागेका बेला नाकबाट निरन्तर बग्ने तरल पदार्थलाई पनि रोक्द छ।
जानिराखौं बहुउपयोगी असुरो कुन–कुन रोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
असुरो सहि मात्र र सन्तुलन मिलाएर यसको पातबाट काढा पकाएर सेवन गरेमा यसले रुघाखोकी, दम, बाथ, ज्वरो, पिसाव पोलेमा, पित्तथैलीमा गडबडी, हृदयरोग, जण्डिस, नाक र मुखबाट रगत आउने, रक्त विकार, पेटमा जुका परेमा, छातीको रोग, क्षयरोग, ब्रोङकाइटिस, जोर्नी दुखेमा र सुन्निएमा, घाँटी दुखेमा, आँखा पोलेमा, जीउ र काखी गन्हाएका समस्याहरुलाई निर्मूल गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यसैगरी, चर्मरोग भएकाहरुले यसको पातको लेदो बनाइ शरीरमा लगाउन सक्छन्। यसको फूल रक्त प्रवाह बढाउन निकै उपयोगी हुन्छ। अन्तत : फेरि पनि यसको शत प्रतिशत नतिजा प्राप्त गर्न र यसको सहि मात्रा र सन्तुलन बनाउनका लागि अनुभवी वैद्य वा चिकित्सकको परामर्श निकै आवश्यक पर्छ।
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १४:१०:४४ बजे : प्रकाशित
# असुरोको पात
# कोरोनाबाट जोगाउने
आज मुलुकभर थप १,९८० जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा १,९८० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ । सोमबार मन्त्रालयको नियमित अपडेटका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १,९८० जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिइएको छ।
योसँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या दुई लाख २२ हजार २ सय ८८ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३,०४३ जना डिस्चार्ज भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या २,०२,०६७ पुगेको छ ।
मंसिर ८, २०७७ सोमवार १७:००:३५ बजे : प्रकाशित
नेपालमा कोरोनालाई जित्नेको संख्या दुई लाख नजिक
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा १,६६९ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ । आइतबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित अपडेटका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १,६६९ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी, पछिल्लो २४ घण्टामा ५,६९९ जना डिस्चार्ज भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या १,९९,०२४ पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा २१,२८४ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ। आज ८,०३२ जनामा पिसिआर परिक्षण गरिएसँगै नेपालमा अहिले सम्म कुल १६,६०,०७५ जनाको पिसिआर परिक्षण भएको छ।
हालसम्म सङ्क्रमणमुक्त भएकाहरू झण्डै दुई लाख पुगेका छन्। नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर ९० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
आज मुलुकभर थप १,६६९ जनामा कोरोना संक्रमण
मंसिर ७, २०७७ आइतवार १६:४८:०८ बजे : प्रकाशित
# कोरोनालाई जित्ने